कहाँ छन् भारतीय कमेडियन कपिल शर्मा ? अब मिडियामा फर्केलान् त ?
पछिल्लोपटक उनले ‘फेमिली टाइम विथ कपिल’ लिएर सोनी टेलिभिजनमार्फत कमब्याक गरेका थिए
सोमबार, १४ जेष्ठ २०७५, सगरमाथा पोष्ट
एजेन्सी, १४ जेठ
भारतीय कमेडियन कपिल शर्मा कमेडी नाइट विथ कपिलका कारण चर्चामा आएका कलाकार हुन् । चर्चाकाे शिखरमा पुग्दै गर्दा कपिल आफ्नै सहकर्मीहरुसँगको झगडा पछि विवादमा मुछिएका थिए ।
विवादमा मुछिए लगत्तै उनकाे शाे पनि बन्द हुन् पुग्याे । पछिल्लोपटक उनले ‘फेमिली टाइम विथ कपिल’ लिएर सोनी टेलिभिजनमार्फत कमब्याक गरेका थिए । उक्त शाेमा पनि चर्चित नायिका रानी मुखर्जीलाई बोलाएर आँफै अनुपस्थित बनेपछि उनी फेरी आलोचीत बनेका थिए । तर, त्यो शो पनि अहिले स्थगित छ ।
पछिल्लो समय कपिल शर्मा कहाँ, के गर्दैछन् कसैलार्इ थाहा छैन् । गुमनाम रहेका कमेडियन कपिल शर्माबारे मिडियाहरुले पनि केहि भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
अत्याधिक विबादका कारण उनी लामो समयदेखि फ्रस्टेनको शिकार बन्न पुगेका छन् । कपिलकाे शुभचिन्तक तथा फ्यानहरूका लागि एकदमै चासाेकाे विषय बनेकाे छ, कहाँ, के गर्दै छन् उनी अनि नयाँ शाे मार्फत कहिले कमब्याक गर्दैछन् ?